China 3-Ply Synthetic Roofing Underlayment စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ မင်္ဂလာပါ
3-Ply ဒြပ် Underlayment
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များပိုမိုကွဲပြားခြားနားရွေးချယ်မှုပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ShiningPlast 3-Ply အတွင်းပိုင်းကိုအလွန်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးအထူးသဖြင့် elastomer antidid ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောဆွဲဆောင်မှုအားကြားခံရန်မျက်နှာပြင်နိမ့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုလုပ်သည်။
အလေးချိန် 80 ~ 150 gsm
ဖွဲ့စည်းပုံ လေးလွှာ - SBPP + LDPP + HDPP + LDPP
အရောင်: SBPP အပါအဝင်ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုနှုန်းအတိုင်း
အရွယ်အစား: 48 '' X 250 '42' 'X 250'
: Self- ကော်ရရှိနိုင်ပါသည်
ဆန့်ခြင်းနှင့်မျက်ရည်ကျခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော ASTM စံတန်ဖိုးများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ခံထုတ်ကုန်များသည် trapezoid မျက်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုကောင်းစွာအောင်မြင်နိုင်သည်။
အထူး UV တည်ငြိမ်မှုရှိသောကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းမည်မျှကြာမြင့်စွာထိတွေ့နိုင်သည်ကိုသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
အောက်ခံအမျိုးအစားအားလုံးကို US သို့မဟုတ် EN standard ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ (စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
1. စက္ကူသို့မဟုတ် PP cores အပေါ်တင်းကျပ်စွာပတ်ရစ်။
၃။ အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် palletization (US သို့မဟုတ် EN Standard Pallets) ။
4. PE ထုပ်နှင့်အတူတင်းကျပ်။
·အကြမ်းခံ: ShiningPlast Underlayment သည်ခိုင်ခံ့ပြီးတာရှည်ခံသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ပြင်းထန်သောမျက်ရည်ခွန်အားရှိသည်။ ၎င်းသည်ခေါင်မိုးကိုအစိုပြေနေသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
·ပေါ့ပါးသည် - ShiningPlast Synthetic Underlayment သည်ပေါ့ပါးသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပြီး၎င်းသည်ခေါင်မိုးများမှသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေသည်။
·Antiskid: ဆွဲဆောင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ SBPP အလွှာအပေါ်အထူးဒီဇိုင်းပုံစံ / ဖောင်းကြွ။ ခေါင်မိုးကုန်းပတ်နှင့်ထည်အကြားပွတ်တိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အထူးတောက်ပသောကျောဘက်ကိုအထူး elastomer ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်လည်းအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့ကသင်၏တန်းတူအထိ underlayment antiskid ၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုလုပ်ပါ။
·ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ချည်ထုတ်ယူခြင်း၏အစအဆင့်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချည်အချပ်ကြီးများနှင့်ပုံဆွဲအချိုးများဖြင့်ကလေးငယ်များအားလုံးကိုဂရုစိုက်စပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကိုအဆင့်မြင့်ရက်ကန်းစင်များဖြင့်ရက်လုပ်သည်အထိ၎င်းကိုမပြီးမှီ T-Die Coating မှတစ်ဆင့်ယုတ်လျော့မှုနှုန်းကောင်းစေလိမ့်မည် ကောင်းသောဆန့ / မျက်ရည်နှင့်ကောင်းသော delamination ။ လေပြင်းသို့မဟုတ်ရာသီဥတုဆိုးရွားချိန်တွင်ပင်သင်၏မျက်နှာစာကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။
·မျက်ရည်သက်သေ အပြည့်အဝဆန့်ထားသည့်နေရာတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ ShiningPlast အောက်ခံသည် trapezoid မျက်ရည်အားသာချက်အားဖြင့်မျက်ရည်ကျနိုင်သည်။
·ရေစိုခံ: တိပ်ခွေများကြားရှိအပေါက်များနှင့်အကွာအဝေးများနှင့်မတူဘဲ ShiningPlast ထိပ်တန်းရက်လုပ်ခြင်းသည်အထည်တိုင်းကိုရေစိုခံသည်။
·ခရမ်းလွန် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည် UV ထိတွေ့မှုအတွင်းတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးသောခရမ်းလွန်ကုသမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆင့်မြင့်ပူပြင်းသည့်အရည်ပျော်နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုမိမိကိုယ်မိမိကပ်ကော်ထားသည့်ထပ်ဆောင်း option / function ကိုပေးထားသည်။ ကော်တီးဝိုင်းကိုသင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Anti-Frozen Cover - Light Duty Poly Tarp - ShiningPlast
နောက်တစ်ခု: 2-Ply အိမ် Wrap